WBO Gaachan keenya...WBO hiikkachiisuu jechuun Oromoo salphisuudha.... Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWBO Gaachan keenya…WBO hiikkachiisuu jechuun Oromoo salphisuudha….
Via Qalbeessaa Dhangi’aa, Bitootessa 1, 2019
“WBO Gaachan keenya…WBO hiikkachiisuu jechuun Oromoo salphisuudha….” Qeerroo Oromoo Gujii WBO waliin falmii finiinsaa jira. Qeerroon akkuma kaleessaa WBO (waraana) isaa abdatee waraana mootummaa manneen uummataa guburratti falmii jalqabee jira. Manneen uummata Oromoo Gujii Gubataa jirus Video kanarraa nii argitu. Falmii guddaan WBO’n hiikkachuu hinqabu jedhu dhohee jira. Qabsoon itti fufa!